5 Qof American Ah Oo Lagu Dilay Toogasho Ka Dhacday Mareykanka.
Monday February 12, 2018 - 15:45:34 in Wararka by Super Admin
Ugu yaraan 5 qof oo American ah ayaa dhimatay tira kalane waa dhaawacmeen kadib markii weerar hubeysan uu ka dhacay gudaha wadanka Mareykanka.
Nin hubeysan ayaa gobolka Kentucky ka fuliyay laba weerar waxaana ka dhashay khasaara dhimasho iyo dhaawac ah, saraakiisha booliska ayaa sheegay in ruuxa hubeysan uu dilay labadiisa waalid iyo xaaskiisa kadibna uu usii gudbay guri daris la ahaa halkaas oo uu toogasho ka geystay.
Col. Johnson oo ah taliyaha ammaanka gobolka Kentucky ayaa warbaahinta u sheegay in Nin lagu magacaabo James Nickle uu dilay hooyadii, aabihii iyo xaaskiisa kadibna uu laba qof oo daris la ahaa toogtay waxayna dhimashu gaartay 5 qof kadibna isaga ayaa isdilay oo bastoolad ayuu madaxa iskala dhacay.
Weerarka ayaa ka dhacay deegaan 269 KM dhanka Koonfur Bari uga beegan degmada Louisville ee gobolka Kentucky, dilalka ay geystaan kooxaha gaangiistarrada ah iyo kuwa naftooda khamaaray ayaa kusii badanaya gudaha wadanka Mareykanka.
Donald Trump ayaa dhawaan sheegay in bil walba boqolaal qof Mareykanka ay ugu dhintaan toogashooyin ay geystaan kooxo daroogo qabatoomay isagoo ka digay sii sharciyaynta ka ganacsiga daroogada.